म वार्ताका लागि कारागार गएको होइन: मणि थापा – Palika Times
म वार्ताका लागि कारागार गएको होइन: मणि थापा
पालिका टाईम्स २१ माघ २०७७, बुधबार प्रकाशित
२१ माघ, काठमाडौं । सरकारले विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा वार्ताको सुरुवात गरेको छ । खानेपानीमन्त्री मणि थापाले हिजो मंगलबार नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ लाई कारागारमै पुगेर भेटेका थिए । भेटमा के कुरा भएको थियो भनी राजधानीकर्मी महेश्वर गौतमले मन्त्री थापालाई सोधेका थिए । कुराकानीको सम्पादित अंश–
सरकारले विप्लवसँग वार्ताको सुरुवात गरेको हो ?
सरकारले यसअघि नै पनि विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हो तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन । सरकारले बनाएको वार्ता टोलीको समय पनि त्यसै सकियो । विप्लवजीले पनि त्यतिबेला वार्ता स्वीकार गरेको जस्तो देखिएन । अहिले उहाँहरूबाट वार्ताका लागि सकारात्मक छौं भन्ने सन्देश आइरहेका छन् । सरकार पनि वार्ता विरोधी होइन ।
सरकार वार्ताका लागि तयार हो त ?
सरकार सबैको अभिभावक हो । उहाँहरूबाट वार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश आउँदा सरकार पनि तयार हुनुपर्छ, सरकार तयार छ । सरकारलाई उहाँहरूले ठ्याक्कै सन्देश दिनुभएको छैन । पहिला उहाँहरू तयार हुनुप¥यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछौं, राजनीतिको मूलधारमा आउँछौं भन्नुभयो भने सरकार स्वागत गर्न तयार छ ।
सरकारले त्यसो भए वार्ताका लागि समिति बनाउँछ ?
विप्लवजीसँग वार्ताका लागि अहिले नै समिति बनाउने भन्ने परिस्थितिमा त सरकार पुगिसकेको छैन । तर सरकार सबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गरेर देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन तयार छ । सरकारले विगतमा पनि वार्ताकै लागि समिति बनाएको छ ।
सरकारले पनि वार्ताको वातावरण बनाउन प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने होला नि त ?
उहाँहरू शान्तिपूर्ण मार्ग र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउन सहमत हुनुभयो भने सरकार प्रतिबन्ध हटाउन तयार छ । तर त्यो प्रतिबद्धता विप्लवजीहरूबाट आउनुपर्छ । सो प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन तर सम्भावना बढेको छ ।
वार्तामा सरकारी पक्षको संयोजन गर्न यहाँ तयार हो ?
म वार्ता गर्नकै लागि भनेर कारागार गएको त होइन । कारागारबाट गुनासो आएपछि अनुगमनका लागि पुगेको थिएँ । सो क्रममा सुदर्शनजीसँग भेट भएको हो । उहाँसँग काठमाडौंमा सँगै बसेको, पढेको पनि हो । जनयुद्धमा पनि सँगै लागियो । भेटका क्रममा वार्ताको कुरा पनि भयो । उहाँ पनि सकारात्मक नै रहेको पाएँ । सरकारले आवश्यकता देखेर जिम्मेवारी दियो भने वार्ताका लागि नेतृत्व दिन सक्छु । आजको राजधानी दैनिकमा अन्तर्वार्ता छापिएको छ।
आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोग जाँदै प्रचण्ड-नेपाल समूह
नेकपा प्रचण्ड- नेपाल समूहले भोलि आम हड्ताल गर्ने